Saraakiisha ciidankii diidanaa muddo kororsiga oo Sagaal qodob soo saaray (Akhriso) | Allbanaadir.com
Home MUQDISHO Saraakiisha ciidankii diidanaa muddo kororsiga oo Sagaal qodob soo saaray (Akhriso)
Waxaa maanta magaalada Muqdisho kulan xasaasi ah ku yeeshay saraakiishii hogaamineysay ciidamadii ka soo horjeeday muddo kororsiga, iyagoo iska wareystay xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka iyo sidii loola jaanqaadi lahaa isbedelka ku dhacay siyaasada dalka.
Saraakiisha ayaa isla soo faaqiday walaaca laga qabo in ciidamada gadooday la beegsado iyo sidii loo soo celin lahaa amaanka magaalada Muqdisho, iyadoo laga duulayo amarkii ka soo baxay RW Rooble ee ahaa in ciidamadu ku laabtaan xeryahooda.
Waxaa kulankan lagu magacaabay Guddi ka kooban 7 Xubnood oo ka tirsan saraakiisha Ciidankii hor istaagay muddo korarsiga Farmaajo, kuwaasoo la fadhiisan doonna Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda Xil gaarsiinta ah ee Rooble iyo dhammaan xubnaha Mucaaradka ah.
Xubnahaan ayaa kala ah :-
Gen. Saadaq John
Gen. Gacma Dulle
Gen. Indha Cadde
Col. Saney Cabdulle
Col. Liibaan Madaxweyne
Waxaay sidoo kale soo sareen 9 qodob oo ay ugu muhiimsan yihiin.
Previous articleMucaaradka oo Booliska DF ku soo celiyey gaari lagala goostay iyo Muuse Suudi oo..
Next articleGen. Xijaar oo amar cusub siiyey ciidanka Booliska ee ka howlgala Muqdisho